IFTIINKACUSUB.COM: Qofna igama cadhaysiin karo anigoo ogolaado mooyaane!
Qofna igama cadhaysiin karo anigoo ogolaado mooyaane!
Iftiinkacusub.com: Cadhadu waa shay dabiici ah oo qofkasta oo Bini'aadmi ah iskaga abuuran,halku dhiga qoralkayga waxa aan ugu magac daray"qofna igama cadhaysiin karo aniga oo ogolaada mooyane,taas macanaheedu maaha""* kaalay i cay ,kadibna iga dhur sug ,waxa aad arki doonta in aanan cadhoon"".
Dabeecada Adanaha ayaa waxa ay u samaysan tahay in ay waxyaabo badan ka cadhooto,haddii dhagax yar oo wadada yaala aad ku turun turooto,waxaa dhici karta in aad ka cadhooto, kadibna dhagaxii inta aad qaado in aad meel ku dhufato,taasi waxa ay calaamad u tahay aargoosiga cadhada.
Noole kasta oo Ilahay abuuray waa uu cadhoodaa,haddii laga cadhaysiiyo.Xayawaanku waa ay cadhodaan haddi laga cadhaysiiyo;Qudhaanjada ayaa ugu yar haddii aad ka cadhaysiiso waxaa laga yabaa in ay kaa aargoosato itaalkeedana ay ku qaniinto.
Dadba waxa ay ka cadhoodaan marka taladooda la qaadan waayo;waayo waxa ay arkayaan in taladoodu ay tahay mid munaasab ah.
Qofkasta oo cadhooda waxa uu jecel yahay in uu ka aargoosto qofkii ka cadhaysiiyay.Haddii Qudhaanjo ku qaniinto waxaa dhici karta in aad far iyo suul ku burburiso, ilayn Maroodi oo kale ayaad u tahay'e ,adiga oo ka cadhaysan ama ka xunuun siday qaniinyadiidee kululayd.
Haddii aad fadhiisto oo aad masalaha dhigato god wada qudhaanjo ah,kadibna marba toban ay ku qaniinaan,saw taasi keenimayso in aad qudhaanjadii oo dhan u cadhoodo, adna aad marba labaatan disho,balse haddii aad ka fogaato meelaha ay godadka iyo guryaha ku leedahay waxa hubaala in aad kala nabad galaysaan;taasi waxaa ka dhigan ,dadka sharka iyo cadhada dadka ku abuura in aad ka fogaato meelaha ay fadhiistaan iyo barnaamijyadooda ay dadka ku cadho galiyaan.
Qofkasta oo laga cadhaysiiyaa macnaheedu maaha in uu cadhoodo oo uu xadh-kaha goosto.Bal qiimee waxa lagugu yidhi inta uu leeg yahay inta aadan cadhoon.Waxa kaloo baadhaa inta aadan cadhoon adigu in aad qayb ka tahay in aad cadhooto,dib u baadh in aad adigu lugahaaga kusoo raadsatay dadkii kaa cadhaysiin lahaa.
Ma dhci kartaa in qof kugu yidhi kalmad oo kaftan ah,kadibba halkii lagaa rabay in aad la timaado cadho kaftan ah,waxaa dhici karta in ay dadka qaarkii ku dhaqaqaan cadho tii ugu xumayd, qofkii la kaftamayna ay halkaasi ku kala go'doomaan ama iskuba nacaan.
Baro naftaada ogowna waxa ku cadho galiya iyo waxyabaha aan ku cadho galin,qiimee dadka inta badan aad cadho galiso waxa ay kaaga xanaqaan,taasi waxa ay faa'iido u tahay in aad ka dayso dadkaasi waxa cadho galinaaya si ay adigana kuu ixtiramaan.
Rasuulkeenii suubanaa CSW,nin ayaa waxa uu ku yidhi Rasuul ALLAW ila dardaaran,kadibna Nabigu waxa uu ku yidhi ha cadhoon,Nabigu sadax goor ayuu ku celiyay hdadalka ah ha cadhoon,ha cadhoon,ha cadhoon .Cadhadu waa shar,waxaana shaqo uu shaydaan dadka ugu soo gabado.Nabigu SCW waa uu diiday sadax casho wax ka badan in dadka Muslimiinta ah ee saxibada ahi ay cadho ku kala maqnadan.
Hadaba marka aan ku leeyahay ,Qofna igama cadhasiin karo aniga oo ogolaada mooyaane,taasi waxa ay noqonaysaa in aan anigu ogolaado in aan isku furo albaabka sharka iyo shaydaanka,kadibna cadho iyo ciil maalinkasta la duubnaado.
Haddii marka hore aad ka taxadarto kana digtoonaato waxkasta oo aad isleedahay waa ay ku cadho galinayaan, waxa aan hubaa in aadan cadhoonayn ama aadan arkayn wax kaa cadhaysiiya.
Qofka Adanaha ahi haddii uu ku dadaalo in aanu isagu dadka ka cadhaysiin,xaq waxa uu u leeyahay in aan isagana laga cadhaysiin.Wakhtiyadan danbe waxaa soo baxay dad iyagu u samaysan in ay dadka ka cadhaysiiyaan,iyaga oo adeegsanaaya dhinaca Qabiilka,gobolaysiga,xisbiyada iyo ismaan dhaafka siyasada ee maanta jira.
Arimaha ugu badan ee iminka dadka kala irdheeyaa waa arimaha siyaasada,waayo dadkii ayaa wada siyaasi noqday.Haddii aad badsato ku muranka iyo kasoo horjeedka fikradaha aan salka lahay ,waxaad ogataa in markasta ay cadhadaadu ay badanayso,waayo wax aad isku furtay albaabkii cadhada.
Yeelo dad kuu gaar ah oo aad ka wada doodi kartaan arimaha siyasada,waayo waxa aan ogahay in ay doodaha siyaasadu ay maanta yihiin kuwo ka sheekaysigoodu uu laf dhabar inoo yahay.hadaba si aadan u noqon mid markasta laga cadhaysiiyo ama wax ka cadhaysiiya,raadso cid aad waxbadan isla fahmi kartaa,hasa yeeshee aydaan ku kala tagayn.
Iska xidh iskana jooji qofka aad aragto in aydaan wada doodi karayn,taasi waxa ay ku dhaxal siinaysaa haddii aadan doodiisa iska joojin in hadalkiisu muran iyo cadho naftaada ku beero,aakhirkana aad qofkii nacdo.
In aad naftaada cadhada ka ilaalisaa ,waxa ay ku gaadhsiinaysaa in naftakala aad ka ilaaliso in aad ka cadhaysiiso. Cadho karta waxbaa keenee iswaydii kadibna ku dadaal in aad albaabka dhamaanti iska banado.
Haddii ay dhacdo in uu qof igu qaldamo ama uu iga cadhaysiiyo,miyaanan xaq u lahayn in aan iska dhaafo ama aan iska saamaxo,taas macnaheedu saw maaha in aanan ogolaan in aan cadhoodo.
Qofka dadka caaya ama aflagadeeya haddii aad dood iyo hadal la gasho,taasi waxa ay cadaynaysaa in aad adigu albaabkii cadhada isku furtay.xidh Albabka ku cadho galiya markasta qufulna ku dhufo hana furin,furahiisana ku halmaan meel aadan hadhaw kasoo helin ama aanu kaga muuqan.
W/Q: Khadar Aar